30 / 04 / 2021 30 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 472 Views စာ0မှတ်ချက် Lego, Lego ဒဏ္Myာရီ, ဥပဒေ, LEGOLAND ဒဏ္MYာရီ, LEGOLAND ဝင်ဆာ, LEGOLAND ဝင်ဆာအပန်းဖြေစခန်း, ဒဏ္.ာရီ, ဒဏ္Myာရီ - ဒဏ္Myာရီပုံပြင်များကမ္ဘာ
LEGOLAND ဝင်ဆာ ကလေးများအတွက်အခမဲ့လက်မှတ်များကို p အဖြစ်ပေးသည်art ၂၀၂၁ တွင်နေထိုင်သူများအနေဖြင့် MYTHICA ၏မြေယာအသစ်များကိုအထူးနှုန်းထားဖြင့်စစ်ဆေးရန်အခွင့်အလမ်းများပေးခဲ့သည်။
ကမ်းလှမ်းမှုတွင်အထိမ်းအမှတ်ပန်းခြံသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ အနီးအနားရှိဟိုတယ်တစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေ အပန်းဖြေအနားယူခြင်းနှင့်နံနက်စာသုံးဆောင်ခြင်း။ အပန်းဖြေစခန်း guests ည့်သည်များအနေဖြင့်လည်းအခန်းများနှင့်ကားရပ်နားရန်နေရာလွတ်များအခမဲ့ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည် Lego လက်ဆောင်နှင့် p ယူပါart ည ဦး ယံ၌ဇာတ်ကောင်တွေ့ကြံ -and နှုတ်ဆက်သည်။
ဒီမြှင့်တင်ရေးသည်မေလ ၁၇ ရက်မှဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့တွင်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ Lego ဒဏ္ICAာရီ - မေလ ၂၉ ရက်တွင်အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်ဒဏ္Myာရီပုံပြင်များ။
MYTHICA သည်လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကတည်းကဥယျာဉ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။ Lego LEGOLAND Windsor သို့မော်ဒယ်လ်များနှင့်မိသားစုနှင့်ရင်းနှီးသောအတွေ့အကြုံများရှိသည်။ သင်ကမြေယာအသစ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိနိုင်သည် ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း.
ယင်းမှဦးခေါင်း LEGOLAND ဝက်ဘ်ဆိုက် သင့်ရဲ့ကလေးတွေ - သွား - အခမဲ့လက်မှတ်တွေ secure ရန်။ တည်းခိုခန်းမြှင့်တင်ရေး၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရယူရန်မေလ ၄ ရက်ညသန်းခေါင်ယံအထိသင်ရရှိသည်။
ယခုနှစ်မေလစတုတ္ထကမ်းလှမ်းချက်များအားလုံးကိုခြေရာခံပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံစာမျက်နှာနှင့်ထိုအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Star Wars အစုံ (နှင့်သင်၏ဘွတ်ကင် Legoland လက်မှတ်တွေ!) ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← အသစ် LEGO Minecraft နွေရာသီ 2021 အစုံထုတ်ဖေါ်
LEGO MASTERS USA Season2၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာဖြိုဖျက်ခြင်းဒါဘီဖြစ်သည် →